AKG K451, mahedhifoni akapihwa muna2009 nekuda kwemhando yavo | IPhone nhau
AKG K451, nharembozha dzakapihwa muna2009 nehunhu hwadzo, zvino dzachipa
Hongu, ichokwadi, ramangwana rekubatana rinofanirwa kuenda kuburikidza neasina waya kubatana, asi zvakare ichokwadi kuti izvi zvinongedzo zvinongogona kushanda kana zvese zvishandiso zvakabatana kune sosi yemagetsi, ndiko kuti, kunzvimbo yemagetsi kana kune yavo ngoma. Mahedhifoni eBluetooth akanaka kwazvo, asi kana tichiashandisa isu zvakare tinofanirwa kuziva kuzvitonga kwavo, chimwe chinhu chisingaitike neafoni kana tambo mahedhifoni, senge AKG K451.
Kana isu tichiteerera kumimhanzi kwemaawa akati wandei nemahedhifoni, pamusoro pehunhu hwemhando, pane zvinhu zvakati wandei zvakakosha: izvo zvinhu zvatinotsigira pamusoro wedu uye huremu hwechigadzirwa. Pamwe (pamwe pamwe) iyo Achilles chitsitsinho cheAKG K451 iri huremu hwayo, ingangoita 454gr kuti, kana tikazvitarisa kubva kudivi rakanaka, vanoratidza kuti havasi toy, asi mahedhifoni anoti anounza ruzha rwakanaka uye akavakwa nezvinhu zvakanaka.
AKG K451, akapihwa iyo Red Dot Mubairo 2009
Kukunda hurema hurema, iyo ichiri yakaderera zvakanyanya kupfuura iya yemamwe mahedhifoni akadai Parrot Zik 2.0, iyo AKG K451 inayo super akapfava nzeve mapedhi izvo zvakasununguka kwazvo panzeve dzedu, chimwe chinhu chakakoshawo kana izvo zvatinoda kuteerera mimhanzi kwemaawa akati wandei Uye zvakare, sezvo vasina bhatiri rekushandisa tambo, hatifanirwe kunetseka mune izvi.
Iye zvino zvatiri muzhizha, zviri nyore kuti isu tinoda kuenda kune chalet, kumahombekombe kushambira kana kuenda kuzororo, handiti? Zvakanaka mahedhifoni aya inogona kupetwa, izvo zvinotibvumidza kuti tizviise mune chero bhegi kana dhirowa. Pasina kupokana, kugona kuapeta ipfungwa yakanaka kana izvo zvatiri kuda kuriisa musutukesi uko chero imwe nzvimbo yekugamuchirwa inogamuchirwa. Zvakare, iwo haasi makuru mahedhifoni, kuyera 8,2 x 18 x 25 cm.
Sezvandambotaura pamusoro, vakahwina mubairo muna2009, zvinoreva zvinhu zviviri: kuti yanga iri pamusika kwemakore uye, zvirinani, mutengo wayo hauna kufanana nepakaenda pakutengesa, kugara pa mutengo we € 66,69 panguva yekunyora (€ 89,99 ndiwo mutengo wayo). Nekudaro, kana iwe uchitsvaga emhando yepamusoro mahedhifoni uye ayo iwe haufanire kunetseka nawo usina kushandisa mari yakawanda, iyo AKG K451 inogona kukufarira.
Tenga | Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » AKG K451, nharembozha dzakapihwa muna2009 nehunhu hwadzo, zvino dzachipa
Maitiro ekuyedza Ruzhinji Beta yeIOS 10 uye macOS Sierra
Pokémon GO yatove kubudirira muAustralia, asi mapurisa anoyambira nezve njodzi dzayo